Santionany fivoriambe PCB
Fivoriambe PCB haingana
Assembly PCB Volume
Sona mpandray anjara
Fahafahana PCBA sy serivisy hafa
Fahafahana mivory PCB
Fivorian'ny birao boribory
Mpanamboatra Pcb Assembly
Orinasa fivoriambe elektronika
Fivorian'ny birao vita pirinty
Torohevitra sy tetika
Teny lehibe: SMT Assembly, prototype PCBA, fivoriambe SMT PCB, PCB SMT
Amin'ny maha matihanina mpanamboatra fivoriambe pcb, ary manana folo taona mahery isika ao amin'ny fivorian'ny SMT PCB. Izahay dia manolo-tena hihaona amin'ny filan'ny mpanjifanay amin'ny indostria samihafa amin'ny kalitao, ny fandefasana, ny fahombiazan'ny vidiny ary ny vahaolana PCB. Manomeza tolotra manokana namboarina ihany koa. Manamboatra ny PCB amin'ny teti-bolanao izahay ary mamonjy ny fotoanao hahazoana tsena.
Fa maninona no mifidy ny fivoriantsika SMT PCB?
Teny nalaina an-tserasera 1.24 ora.
2. Serivisy maika 12 ora ho an'ny PCB prototype.
3. Vidiny mora sy mifaninana.
4. Fitsapana fiasa mifototra amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana.
5. Ny ekipanay matihanina sy azo antoka dia manamora ny fananganana na famahana olana. Ity no tianay hanomezana fahafaham-po ny mpanjifanay. Manome serivisy feno izahay manomboka amin'ny famolavolana fizaran-tany ka hatramin'ny fitaovana vita ho an'ny tabilao vita pirinty. Faly foana izahay manome anao tolotra kilasy voalohany.
6. 10 taona traikefa amin'ny fividianana singa Elektronika.
7. Manatitra ny PCB anao mivantana sy haingana izahay aorian'ny famaranana avy amin'ny orinasa.
8. Factory SMT azo itokisana miaraka amina andalana SMT 8, Fitsapana fiasa 100%, famokarana prototype, vahaolana mahomby.
Afaka manome isika?
1.Fivoriambe PCB Prototype
2.Fivorian'ny PCB misy lafiny roa
3.Multi-layer PCB fivoriambe
Fivorian'ny PCalum 4.aluminum
Fivoriambe PCB 5.Flexible
6. Vonio haingana fivoriambe PCB
Fivoriambe PCB turnkey
8. Stencil SMT vita amin'ny vy ho an'ny pirinty vita amin'ny solder notapahina tamin'ny laser.
Ny fizotry ny SMT PCB Assembly:
Ny fizotry ny fampiasana SMT hanamboarana fitaovana PCB dia misy ny fampiasana milina mandeha ho azy hanangonana singa elektronika. Ity masinina ity dia mametraka ireto singa ireto eo amin'ny solaitrabe, saingy alohan'izay dia tsy maintsy voamarina ny rakitra PCB hanamafisana fa tsy manana olana izy ireo amin'ny fiovan'ny famokarana sy ny fiasan'ilay fitaovana. Aorian'ny fanamafisana fa tonga lafatra ny zava-drehetra, ny fizotry ny fivorian'ny SMT PCB dia tsy voafetra amin'ny fametahana sy fametrahana singa na fitambarana ao amin'ny PCB.Ireto dingana manaraka ireto dia tsy maintsy arahana ihany koa.
1. Asio paty solder
Ny dingana voalohany rehefa manangona ny solaitrabe SMT PCB dia mampihatra ny paty soldering. Ny paty dia azo ampiharina amin'ny PCB amin'ny alàlan'ny teknolojia lamba landy. Azo ampiharina amin'ny alàlan'ny stencil PCB namboarina avy amina rakitra output ihany koa. Ianao ihany no mila manapaka ny stencil amin'ny alàlan'ny laser ary apetaho amin'ny soldering ny faritra izay hametaka ireo singa. Ny fampiharana solder paste dia tsy maintsy tanterahina anaty tontolo mangatsiaka. Raha vantany vao vita ny fangatahana dia afaka miandry fotoana vitsivitsy ianao amin'ny fivoriambe.
2. Fanaraha-maso ny paty soldero
Aorian'ny fametahana ny paty solder amin'ny tabilao, ny dingana manaraka dia ny fizahana azy hatrany amin'ny alàlan'ny teknikan'ny fanaraha-maso fametaka. Ity fizotrany ity dia zava-dehibe, indrindra rehefa manadihady ny toerana misy ny pasteur solder, ny habetsaky ny pacte solder ampiasaina, ary ireo lafiny fototra hafa.
3. Fanamafisana ny fizotrany
Raha sanatria ka mampiasa singa SMT amin'ny lafiny roa ny birao PCB anao, dia ilaina ny mandinika ny famerenana ny dingana mitovy amin'ny fanamafisana ny lafiny faharoa. ho azonao atao ny manara-maso ny fotoana mety indrindra hampiharihariana ny paty solder amin'ny hafanan'ny efitrano eto. Ity dia rehefa vonona hivory ny tabilao fizaran-tanyo. Ireo singa dia mbola ho vonona amin'ny orinasa manaraka.
4. Kitapo fivoriambe
Ity dia mifandraika amin'ny BOM (Bill of Materials) izay ampiasain'ny CM ho an'ny fanadihadiana data. Manamora ny fampandrosoana ny kitapo fivorian'ny BOM izany.
5. Kitapo fitahirizana entana misy singa
Ampiasao ny kaody bara hanesorana azy tsy ho ao anaty tahiry ary ampidiro ao amin'ny kitapo fivoriambe. Rehefa napetraka tanteraka ao anaty kit ny singa dia entina mankany amin'ny masinina sy toerana antsoina hoe teknolojia ambonin-tany izy ireo.
6. Fanomanana ireo singa hapetraka
Fitaovana pick-and-place no ampiasaina eto hitana ny singa rehetra hivory. Mampiasa cartridge koa ilay milina izay misy fanalahidy tsy manam-paharoa izay mifanitsy amin'ny kitapo fivorian'ny BOM. Ny masinina dia natao hilazana ny ampahany nitazomana ny cartridge.
Ny fizotry ny fivorian'ny SMTdia manova ny fizotry ny famokarana PCB ary mitondra azy amin'ny dingana manaraka. Ity dia teknolojia mahomby, mahomby ary azo atokisana amin'ny famoronana PCB. Ny hany zavatra andrasana amin'ny ho avy dia mazava ho azy ny fanatsarana ny teknolojia SMT PCB iray manontolo satria tsy dingana mora izany. Ny vaovao tsara dia na androany aza dia afaka mahazo takelaka PCB azo antoka amin'ny vidiny mirary ianao. Na izany aza, ilaina ny mifandray amin'ny injeniera na mpanamboatra azo itokisana miaraka amin'ny fitaovana sy traikefa tsara indrindra hahazoana ny takian'ny birao. Mba hanampiana anao hahatakatra ny mpamokatra tsara indrindra dia azonao atao ny mieritreritra ny hampiasa fitaovana maoderina, akora voalohany, vidiny mirary ary mpamokatra mandefa ara-potoana.
Iraka ataon'ny PCBFuturedia ny fanomezana indostrialy ny famokarana PCB mandroso sy serivisy fanangonana manomboka amin'ny prototype ka hatramin'ny famokarana amin'ny fomba mahomby. Ny tanjonay dia ny hanampy ny mpampiasa tsirairay ho tonga mpitsabo mahay mandanjalanja sy mahay mifehy izay afaka mitondra am-pahatokisana ireo hevitra momba ny injeniera manara-penitra hiatrehana asa sy olana ary haitao mifanaraka amin'izany.
Raha manana fanontaniana na manontany ianao dia aza misalasala mifandray sales@pcbfuture.com , hamaly anao izahay ASAP.
Ny mpanamboatra birao fanaovana pirinty eto amin'izao tontolo izao ary mpanamboatra fivoriambe.
--- Ho mpiara-miasa azo antoka ---